> Resource> iPod> Olee otú iji Play Torrent on iPod
iPod apụghị egwu iyi faịlụ?
Torrent fim ma ọ bụ music ebudatara site na Bittorent ma ọ bụ Utorrent ndị na-emekarị na .zip ma ọ bụ rar ndọtị, decompress ha na ị ga-esi na chọrọ faịlụ. N'ihi na videos, ha na-emekarị na MP4, MKV, AVI, WMV, MOV, wdg; maka audios, ha nwere ike hụrụ na AAC, M4A, WMA, OGG, MP3, wdg Ị nwere ike igwu ha were were na VLC, ma ọ bụ Mplayer on PC. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị pụtara na-egwu ha na iPod, i nwere ike mgbe niile na-ịdọrọ ha n'ime iTunes ruru kedi nke. Ka ihe video format iPod akwado:
Audio: AAC (8 na 320 kbps), Echekwara AAC (site na iTunes Store), ọ-AAC, MP3 (8 na 320 kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible enwekwukwa Audio, AAX, na AAX + ), Apple Lossless, AIFF, na WAV Video: N'ozuzu H.264 video na MPEG- vidio, na-abịa .M4V, MP4, MOV faịlụ ndọtị. N'ihi na iPod aka, o nwere ike na-akwado ụfọdụ AVI faịlụ na mmachi na TV show na ngwa na etinyere ya.
The iPod apụghị ịmata faịlụ ọ bụrụ na ha amakọghị n'elu chọrọ. Iji idozi nke a, ị pụrụ ịgbaso n'okpuru nduzi:
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata iyi na na na iPod na Mac
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata iyi na na na iPod na Windows
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata iyi faịlụ na na na iPod na Mac
Iji tọghata MP4 faịlụ ka iPad-dakọtara faịlụ na Mac, ị nọ ná mkpa nke a ọkachamara Video Ntụgharị maka Mac maka enyemaka. Onye na-eji na akụkụ a na-enye ihe nnọọ mfe ma oru oma MP4 ka iPad 3 Mac akakabarede. The akụkụ kasị mma bụ ọ na-enye ndị presets maka iPod nke ọ bụla na ụdị, (iPod nano, kpochapụwo, aka), nke ala gị akakabarede ukwuu na-egwu zuru okè na gị iPod.
Download free ikpe mbipute nke iyi na-iPod Ntụgharị maka Mac.
Nzọụkwụ 1: Tinye iyi faịlụ ka iyi na-iPod Ntụgharị
Kpọmkwem ịdọrọ na dobe gị iyi faịlụ ka usoro ihe omume, ma ọ bụ pịa "File"> "Ibu Ibu Media Files" mbubata gị iyi faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Họrọ ị họọrọ mmepụta format
Pịa Format icon na ala nke a na ngwa akakabarede ebi ndụ, wee họrọ "Devices"> "iPod". Ọ bụrụ na ị na-achọ na na na iPhone / iPad, na-ahọrọ nri iPhone ma ọ bụ iPad nlereanya ị chọrọ n'aka "Devices".
Nzọụkwụ 3: Malite iji tọghata iyi ka iPod
Pịa "tọghata" button iji tọghata iyi ka iPod na Mac OS X gụnyere Snow agụ owuru na OS X odum. Mgbe ahụ, mbubata converted faịlụ ka iTunes na mmekọrịta ha ka ha iPod na obi ụtọ.
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata iyi faịlụ na na na iPod na Windows
Na nke a ọkachamara na mfe iji Wondershare Video Ntụgharị maka Windows, ị nwere ike nweta iyi ka iPod akakabarede seamlessly na effortlessly. Nanị atọ mfe nzọụkwụ na-mkpa.
Download free ikpe mbipute nke iyi na-iPod Ntụgharị maka Windows:
Tinye iyi faịlụ ka iyi na-iPod Ntụgharị.
Họrọ iPad preset awa dị ka mmepụta usoro.
Pịa "tọghata" button.
1. Ị nwere ike ịtọ converted faịlụ-atụkwasịkwara iTunes n'ọbá akwụkwọ na-akpaghị aka mere na ị pụrụ mmekọrịta ha ka ha iPod conveniently. Iji aka rụọ ọrụ / deactivate ya, ị nwere ike họrọ NchNhr> Mmasị> tọghata> Tinye faịlụ ka iTunes Library mgbe akakabarede. The Mac version nke iyi na-iPod Ntụgharị nwere Ẹkot nhọrọ.
2. The iyi ka iPod Ntụgharị na-enyekwa nkịtị edezi ọrụ gbanwee gị mmepụta video, gụnyere cropping, trimming, na-ekewa, Mmetụta, agbakwụnye Watermark ma ọ bụ ndepụta okwu. (N'ihi na windows version, nri pịa video clip ma họrọ "Dezie." N'ihi na Mac , pịa edit image n'akụkụ ọ bụla video aha ka ịnweta edit window)
Free download iyi ka iPod Ntụgharị:
Olee otú iji tọghata na Pọt Videos on iPod
Otú nyefee Music si iPod ka USB Flash Drive